Murrashax Cirro oo Berbera Kula Dabbaal-degay Taageerayaasha Xisbiga WADDANI Oo Muujiyey Cuddudooda Kana Hadlay Weerarkii Gurigiisa | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Murrashax Cirro oo Berbera Kula Dabbaal-degay Taageerayaasha Xisbiga WADDANI Oo Muujiyey Cuddudooda Kana Hadlay Weerarkii Gurigiisa
Berbera(ANN)-Murrashaxa Madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi(Cirro) iyo wefti balaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Kumanaan taageerayaal xamaasadaysan ah ayaa musharraxa kaga horyimid duleedka Berbera kuwaas oo ku dabaal degay jidadka magaalada markii dambena madaxdu khudbado ugu jeedisay fagaaraha Berbera oo ay isugu yimaadeen kumanaan jamaahiirta Waddani ah oo ku labisan calanka liimiga ah iyo sawirrada musharrax Cabdiraxmaan Cirro iyo kuxigeenkiisa Dr Maxamed Cali.
Agaasimihii wasaaradda Diinta iyo awqaafta Sheekh Saleebaan Siciid Cali ayaa sheegay in uu olole laxaad leh u galayo dhisidda musharrax Cabdiraxmaan Cirro “Nimanka yuhuudda la yidha dhaqan ayay lahaayeen, dhaqanka ay lahaayeen waxa weeye qofka Diintooda ka baxa waxay odhan ‘jireen waxba muu ahayn’ Iyaga oo dhaqankaas leh waxa ka soo islaamay ninkii ugu weyna oo la odhan jiray Cabdillaahi Binu Salaam.
Cabdillaahi wuu qarsaday Islaamnimadiisa waxaanu Nabiga CSW ku yidhi inta aanad u sheegin in aan islaamay bal horta waydii Yuhuudda muxuu Cabdillaahi dhexdiina ka ahaa? Waxay yidhaahdeen waa nin Madax ah waliba nin madax noo ahaa ayaa dhalay, markaas ayuu ku yidhi bal haddii uu Islaamo ka warrama? Waxay yidhaahdeen ‘waa cadceedda oo galbeed ka soo baxda’ kadib Cabdillaahi ayaa ashahaatay waxaanay isla markiiba yidhaahdeen waa kii noogu sharka badna kii noogu sharka badnaana wuu dhalay. Maanta muuqaalka aanu leenahay, saamaynta aan gobolka Saaxil ku leeyahay ma bedelayo gelitaanka aan Waddani galay, iyaguna(Kulmiye) samayn maayaan in ay yidhaahdan markii aan Kulmiye ahaa in ay yidhaahdan Sheekh Saleebaan mar haddii uu halkaas joogo waa olole yahan Sheekh Saleebaan haddii uu ka taggana bisad noqon maayo sidii aan libaaxa u ahaa ayuun baan libaax u noqonaya,” Sidaas ayuu yidhi Sheekh Saleebaan.
Siyaasiyiinta kala ah Maxamed Biixi Yoonis wasiirkii arrimaha dibada xukumadda Siilaanyo, wasiirkii arrimaha gudaha xukumadodii Riyaale Ismaaciil Aadan Cismaan(Ismaaciil Yare) Abiib Diiriye Nuur oo xilal ka soo qabtay xukumaddii Somaliland dhammaantood ah siyaasiyiin miisaan ku leh oo kasoo Jeeda deegaanka Murrashax Muuse Biixi Cabdi ayaa bulshada reer Saaxil u sheegay in aanu jirin waajib qabyaaladeed ama tolnimo oo ku kallifaya in ay Muuse u codeeyaan maaddaama iyaga oo ay isku hayb yihiinba ku qanci waayeen hoggaamintiisa. Waxa ay bulshada ka wacdiyeen qabyaaladda kuna boorriyeen in ay taageeraan musharrax Cabdiraxmaan Cirro oo ay u arkaan hoggaan dalka iyo dadkaba wax tar u leh.
Murashaxa Madaxweynaha Waddani Cabdiraxmaan Cirro ayaa si weyn ugu mahadceliyay reer Berbera kana hadlay baahiyaha gobolka Saaxil “Berbera waxyaabo badan bay caan ku ahayd; waxay caan ku ahayd dekedda, Madaarka, waxay caan ku ahayd haamo iyo warshado. Waxay ahayd magaalada Kaliya ee biyaha khasabaddaha laga cabo lahayd muddo dheer. Waxay ahayd xarunta ilaha dhaqaalaha Somaliland laakiin, maanta intiiba way hurdaan oo ma shaqaynayaan. Madaarkii ma shaqaynayo, warshadihii ma shaqaynayaan, dekeddii sideedii uma shaqaynayso, haamihiina waad ka war haysaan. Dhulkii Berbera maanta golaha degaanku ma bixiyo ee waxa laga bixiya Madaxtooyada, maayarku waxba ma bixiyo ee wuu iska fadhiya Ayaan filaya meesha. Waxaa la igu yidhi ilaa 50km waa la bixiyay marka magaalada dhinac walba laga eego. Dhulkii loogu talo galay in uu kayd u noqdo haammaha, dekedda iyo madaarka intiiba waa la bixiyay. Intaasiba waxaanu leenahay waa sharci darro. Go’aanka xisbiga Waddani waxa weeye hantida umadda ee aan ku bixin sifo sharci ah dib baa loo eegaya waxaana lagu soo celinaya gacanta shacabka,” Sidaas ayuu yidhi musharrax Cabdiraxmaan Cirro.
Murrashaxa xisbiga Waddani waxa uu sheegay in 1960s Hargeysa iyo Berbera isleekaayeen laakiin, Berbera u kori wayday laba arrimood oo kala ah biyo la’aan iyo laydh la’aan. Waxa uu tilmaamay in meelaha kulul sida magaalo xeebeedda Berbera u baahan yihiin biyo iyo laydh ku filan laakiin, la’aanta labadaasi Berbera ka reebtay magaalooyinkii la faca ahaa ama ka dambe dhismay. Waxa uu sheegay in caafimaadka iyo waxbarashada Berbera tahay mid aad u liidata. Musharraxa ayaa bulshada gobolka Saaxil u ballan qaaday in xisbigiisu wax ka qaban doono dhibaatooyinka haysta maaddaama oo uu wax ku soo bartay kana helay codkii ugu badna xilligii laga doortay 2005.
#1Araweelo News Network > Warar > Murrashax Cirro oo Berbera Kula Dabbaal-degay Taageerayaasha Xisbiga WADDANI Oo Muujiyey Cuddudooda Kana Hadlay Weerarkii Gurigiisa